နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Bali Trip 02 : What to Bring and Necessity
Bali Trip 01 ဖတ်ရန်။
Air Ticket လဲရပြီ။ ဟိုတယ် ဘွတ်ကင်လဲ အဆင်ပြေပြီ။ သွားလည်ရမယ့် နေရာတွေကိုလဲ အသည်းလေးကို တာဝန်ပေးထားပြီး သူကလဲ အိမ်စာတွေ ကြေနေပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဖက်ခြမ်းက လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်ရပါတော့တယ်။
အောက်က စာရင်းကတော့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်တာတွေ ပြုစုထားတာပါ။
၂။ နိုင်ငံတကာမှာ ငွေသားထုတ်နိုင်တဲ့ ATM Card (DBS, POSB သုံးသူများ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြား မထွက်ခင် ကိုယ့် အေတီအမ်ကဒ်ကို နိုင်ငံခြားမှာငွေသား ထုတ်နိုင်အောင် Activate လုပ်သွားသင့်ကြောင်း။ ဘဏ်က ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ အေတီအမ်ကနေ ငွေသား ထုတ်ယူခွင့်ကို အော်တို ပိတ်ထားပါတယ်။)
၃။ ငွေသား (စင်ကာပူ ၅၀၀ အနည်းဆုံး ယူသွားပါရန်။)
၅။ နေလောင်ခံ လိမ်းဆေး (SPF 50 နှင့်အထက် ကိုသာ ဝယ်ယူပါရန်)
၆။ နေကာမျက်မှန် (နေပူချက် ရက်စက်တယ်။)
၇။ ရေကူးဝတ်စုံ (၂ စုံလောက်ဆို တော်ပါပြီ။)
၈။ ထသွား ထလာ ဝတ်စုံ (ချွေးစုပ်လွယ်တဲ့ ၊ ပါးတဲ့ အကျီ ဘောင်းဘီ တို များ)
၉။ ဖုန်း (ဆက်သွယ်ရေး မပြတ်စေရန် ဖုန်းကို Roaming ကြိုဖွင့်ရန်။)
၁၀။ Flip Flop ဖိနပ် နဲ့ Shoe ဖိနပ်
၁၂။ ခရီးသွား အာမခံ
အရင်ကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ခရဒ်ဒစ်ကဒ် မသုံးချင်ပါဘူး။ မသုံးချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့
(က) ကိုယ့်ကဒ်ကို မိတ္တူပွားပြီး ခိုးသုံးမှာ စိုးရိမ်တာရယ်။
(ခ) ဒေသခံ ငွေကြေးကနေ ကိုယ့်သုံးနေကျ စင်ကာပူ ဒေါ်လာကို ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ ငွေလဲနှုန်းတွေ ကွာနေတာရယ်။
(ဂ) တစ်ချို့နိုင်ငံတွေက ခရဒ်ဒစ်ကဒ် သုံးရင် ကဒ်ဝန်ဆောင်ခကို ၃ % ထပ်ဖြတ်တာရယ်။
အခုတော့ ဘာလီမှာ ကျွန်တော့ ကိုယ်တွေ့အရ အထက်က အကြောင်းအချက်တွေ ကင်းရှင်းပါတယ်။ ဒီကို ပြန်ရောက်လို့ ဘဏ်ရှင်းတမ်းတွေ ပြန်တိုက်ကြည့်တော့ ငွေလဲနှုန်းက မဆိုစလောက်ပဲ ကွာတာမို့လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလီမှာ ငွေလဲနှုန်းက ၇၃၀၀ ဆိုရင် ဘဏ်က ဖြတ်တာက ၇၂၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။
၂။ ATM Card
DBS နဲ့ POSB ဘဏ်က ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးလ လောက်တုန်းက မသမာသူတွေက သူ့အေတီအမ်စက်မှာ လျို့ဝှက် ကင်မရာတွေ တပ်ပြီး ငွေလာထုတ်သူရဲ့ အေတီအမ်ကဒ် အချက်အလက်ကို ခိုးယူ၊ ကဒ်ကို ပွားပြီး မလေးရှားမှာ ငွေသားတွေ သွားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဘဏ်ကနေပြီးတော့ အေတီအမ်ကဒ်တွေကို ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ထုတ်ယူခွင့်ကို Default ပိတ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်က အလည်ခရီး ထွက်လို့ အေတီအမ်မှာ ငွေထုတ်ချင်ရင် ဘဏ်ကို အကြောင်းကြားပြီး ဖွင့်ခိုင်းရပါတယ်။
တစ်ခြားသော ဘဏ်တွေက ပိတ်မပိတ်တော့ မသိပါ။ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ကိုသာ ဆက်သွယ် မေးမြန်းကြပါ။
ကျွန်တော် စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပဲ ယူသွားပါတယ်။ (မလောက်ပါဘူး။ :P )
ချန်ဂီလေဆိပ်က ငွေလွဲကောင်တာကနေ ဒေါ်လာ ၂၀ ဖိုးလောက်ပဲ ငွေလဲသွားပါ။ တက်ကစီဖိုးပါ။ (Hotel ကနေ Airport Transportation ကို ကြိုစီစဉ်ထားရင်တော့ တက်စီ ငှားစရာ မလိုပါ။ ကိုယ့်ကို လာကြိုတဲ့သူတွေကို လူအုပ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ထောင်ထားတဲ့ နာမည် ဆိုင်းဘုတ်ကနေ ပြူးပြဲ ရှာဖို့တော့ လိုပါတယ်။)
ကျွန်တော့် ဟိုတယ် ရှိရာ အရပ်ဖြစ်တဲ့ Kuta ကို သွားချင်ရင် ရူပီး ၆၀,၀၀၀ ပဲ ကျပါမယ်။
လေဆိပ်က အဆောက်အဦက ထွက်တာနဲ့ အဆောက်အဦ အပြင်ဖက် ညာဘက်ခြမ်းမှာ တက္ကစီငှားလို့ရတဲ့ အခန်း ရှိပါတယ်။ TAXI ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအခန်းရှေ့က ကောင်တာမှာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ဧရိယာကို ပြောပြီး ကျသင့်ငွေ ပေးလိုက်ရင် ဘောက်ချာ တစ်စောင် ဖြတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီနားက အသင့်စောင့်နေတဲ့ ဒရိုင်ဘာနဲ့ အတူ ကားပါကင်ထဲက တက္ကစီဆီ လျှောက်သွားပြီး စီးရုံပါပဲ။
ဘာလီလေဆိပ်မှာ ငွေလဲ ကောင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ မလဲပါနဲ့။
မြို့ထဲနားက ငွေလဲတဲ့ နေရာတွေ ရှိပါတယ်။ Money Exchange ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ ငွေလဲဌာနက စိတ်အချရဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ လိုဂိုက အနီနဲ့ အပြာကို Money Exchange ဆိုပြီး သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။
Jalan Pantai Kuta တို့ တစ်ခြားနေရာက လဲပေးတာတို့ဟာ ငွေလဲနှုန်း ပိုပေးတတ်ပေမယ့် Trick တွေ လုပ်တတ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ မသိတဲ့ သူတွေ သွားလဲမိရင် အချဉ်ဖမ်းပါတယ်။
ကိုယ်လဲတုန်းမှာ ငွေကတော့ ကိုက်ပါရဲ့။ ဟော်တယ် ပြန်ရောက်လို့ ပြန်ရေလိုက်ရင် ငွေက မကိုက်တတ်တာ ခဏခဏ ကြုံတတ်ပါတယ်။ အဲလို နေရာတွေကို ရှောင်ပါလို့ အသိပေးချင်ပါတယ်။
အပေါ်က ပြောတဲ့ Red and Blue တံဆိပ်ပါတဲ့ ငွေလဲဌာနကိုသာ သုံးပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သွားတုန်းက မေ ၄-၈ ရက်နေ့ ငွေလဲနှုန်းကတော့ စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာကို ၇၃၀၀ ရူုပီး ရပါတယ်။
ခြောက်လ သက်တမ်း အနည်းဆုံး ရှိရပါမယ်။ Visa On Arrival ယူရပါမယ်။
၅။ နေလောင်ခံ လိမ်းဆေး
ပင်လယ်ကမ်းခြေ ရှိရာ အရပ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် နေအတော်ပူပါတယ်။ နေလောင်ခံ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းထားမှ သင့်တော်ပါမယ်။ ဖူးကက်သွားတုန်းက သေချာ မလိမ်းခဲ့မိလို့ ပြန်ရောက်ပြီး အရေခွံတွေ အသားနီလန်တာ၊ အရေခွံကွာတာ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ SPF 50 နဲ့ အထက် နေလောင်ခံ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းပေးရင် ပိုအဆင်ပြေပါမယ်။ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ဗူးလိုမျိုး ဖြန်းဆေး သုံးပါတယ်။
UV နဲ့ Polarized စတာတွေ ပါတဲ့ အမျိုးအစား မျက်မှန်တွေက စူးရှပြင်းပြတဲ့ နေဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ နေကာမျက်မှန် အဆင်သင့် မရှိလို့ ချန်ဂီင်္လေဆိပ်ထဲက ဂျူတီဖရီးဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ပါတယ်။ Sunglass Hut ကနေ ဝယ်တာပါ။ Immigration ကို ဖြတ်ပြီးရင် ညာဘက် ချိုးလိုက်ပါ။ ဂိတ် E,F သွားတဲ့ ဖက်ခြမ်းမှာ ရှိပါတယ်။
Oakley Holbrook Polarized Polished Black အမျိုးအစား ဝယ်ပါတယ်။ SGD 244.77 ပေးရပါတယ်။ ဘာလီ လေဆိပ်က ဂျူတီဖရီးမှာတော့ ၂၇၀ ကျော် ကျပါတယ်။ ချန်ဂီက ပိုတန်ပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံကတော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ရေကစားချင်သူတွေ Water Sport Activities လုပ်ချင်သူများအတွက် သယ်ဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ ဟော်တယ်ခန်းမှာ ဝရန်တာ ပါရင် အပြင်မှာ တစ်ညလှမ်းရုံနဲ့ ခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပေါင်း မြောက်များစွာ ရိုက်ချင်သူများ၊ ရေကူးဝတ်စုံ မထပ်ချင်သူများ အတွက် ၄ ထည်လောက်တော့ သယ်သွားပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ၂ ထည်ပဲ ယူသွားတယ်။
ထသွားထလာ အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိမယ့် အဝတ်အစားတွေ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ နေပူတာ ပက်စက်တယ်။ ရေများများ သောက်ပေးသင့်တယ်။
ဘာလီမှာ ဖုန်းအော်ပရေတာ မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်ရာကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေများနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်စေဖို့ စင်ကာပူက ဖုန်းကို ခရီးမထွက်ခင်က ကျွန်တော် ကြိုပြီး Roaming ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။
စတားဟဘ်ဖုန်း သုံးထားပါတယ်။ စတားဟဘ်က ဖုန်းဖြေဆိုသူ ညံ့ဖျင်းပုံ ပြောချင်လို့ပါ။
အရင် အလုပ်တုန်းက ပင်လယ်ရပ်ခြား ခရီး ခဏခဏ ထွက်ဖြစ်တော့ Roaming ကို လစဉ်ကြေး ပေးပြီး ဖွင့်ထားပါတယ်။ တစ်လ ၈ ကျပ် ပေးရတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံခြား ရောက်နေရင် သူက စတားဟပ်ရဲ့ Roaming Partner Network ကို ချိတ်ပေးပါတယ်။ ဖုန်း အဝင်အထွက် ပိုက်ဆံပေးရပါတယ်။ မက်ဆေ့ခ်ျကတော့ အဝင် ဖရီးပါ။ အထွက် ပေးရပါမယ်။
အလုပ်သစ် ပြောင်းသွားတော့ ခရီး သိပ်ထွက်စရာ မလိုတော့တာနဲ့ တစ်လ ၈ ကျပ် ပေးရတဲ့ Roaming စရိတ်ကို နှမြောလို့ ပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံခြား ခရီးထွက်ရင် Pay As You Roam ဆိုတဲ့ ပလန်ကို သုံးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ခရီး တစ်ခါထွက်တိုင်း Roaming Function့ ကို ဖွင့်ပေးဖို့ စတားဟဘ်ကို အကြောင်းကြားရပါတယ်။ တစ်ခါဖွင့်ပေးတိုင်း ၁၀.၄၇ ကျပ် ပေးရပါတယ်။
(I just received the bill from Starhub and there was no activation charges at all. I'm not sure they waived for me or it will be reflected and next month bill. But the Roaming call charge and SMS charges were reflected in this bill. So I assume that no activation fees was charged. Let's see next month bill.)
ခရီးမထွက်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ ဖုန်းဆက်ပြောတော့ မအူမလည် ဖုန်းအော်ပရေတာနဲ့ တိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခရီးထွက်ဖို့အတွက် Pay As You Roam Plan ကို Activate လုပ်ပေးဖို့ ပြောတော့ ဒီပလန်က စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတော့တယ်တဲ့။ ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလက စပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတာပါတဲ့...။
ဘာလီရောက်လို့ ဝိုင်ဖိုင်ရတော့ စတားဟပ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ကြည့်တော့မှ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို ဝင်ပြီး ဖွင့်ဖို့ apply လုပ်ရတာ တွေ့တယ်ဗျ..။ အဲဒါနဲ့ Activate လုပ်ဖို့ apply လုပ်လိုက်တယ်။ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပြန်ဝင်လာတယ်။ Next Working Day မှ ပွင့်ပါမယ်တဲ့...။
စောင့်ကြည့်တော့ နောက်တစ်ရက်လဲ နေရော ပွင့်နေတာဗျာ...။
ဖုန်းဖြေတဲ့ မနူးမနပ် အော်ပရေတာ CSO ကို စိတ်ထဲကနေ ကျိန်ဆဲ ပစ်လိုက်တာ...။ @#@$#%$%@^$
ဘာလို့ စင်ကာပူဖုန်းကို ဟိုမှာ သုံးချင်တာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အေတီအမ်ကဒ်၊ ခွက်ဒစ်ကဒ် Transaction အားလုံးကို SMS Alert, Notification အဖြစ် ကျွန်တော့ဖုန်းထဲကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့ဖို့ ဘဏ်နဲ့ ကျွန်တော် ချိတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အေတီအမ်ကနေ ငါးဆယ်နဲ့ အထက် ငွေထုတ်တယ်ဆိုရင် ဘဏ်ကနေ ဘယ်နေရာက အေတီအမ်စက်ကနေ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်လောက် ပမာဏ ရှိတဲ့ ငွေကို ထုတ်ယူပါတယ် ဆိုပြီး မက်ဆေ့ခ်ျ စာတို တစ်စောင်ကို ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းဆီက ပို့လာပေးပါတယ်။ မှန်မမှန် ကိုယ်ကလဲ တိုက်စစ်လို့ ရတာပေါ့လေ။ အကယ်၍များ ကိုယ့်ကဒ်ကို ပွားပြီး တစ်ခြား မသမာသူတွေ တစ်နေရာက ထုတ်ယူမယ် ဆိုရင်လဲ အဲဒီ မက်ဆေ့ခ်ျက ဝင်လာမှာ ဆိုတော့ အလိုအလျောက် သိနေပြီးသားပေါ့။
ခွက်ဒစ်ကဒ်လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ Merchant တစ်ယောက်ဆီမှာ ကိုယ့်ခွက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ ဝယ်သုံးလိုက်လို့ Merchant ကနေ တစ်ဆင့် ကျသင့်ပမာဏကို ဖြတ်လိုက်ရင် ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ ဘယ်လောက် ဖြတ်သွားပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဘဏ်ကနေ မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ပေးတယ်။ ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ ပမာဏ၊ ဆိုင် မှန်မမှန် ချက်ချင်း တိုက်စစ်လို့ ရတာပေါ့...။ (ဘာလီမှာ ကျွန်တော့်ကဒ်ကို ၂ခါ ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဆိုင် အကြောင်း ထပ်ရေးပါမယ်။)
ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဖုန်း သုံးဖို့က လိုပါတယ်။ ပြောတာ မပြောတာ အပထား .. မက်ဆေ့ခ်ျကတော့ အဝင်အတွက် လိုလို့ Roaming ကို ဖွင့်ဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြချင်တာပါ။
၁၀။ Flip Flop ဖိနပ်၊ ရှုးဖိနပ်။
ကမ်းခြေ သွားလည်မှာ ဆိုတော့ ညှပ်ဖိနပ်ကတော့ လိုပါတယ်။ ပူလွန်းလို့ ရှုးဖိနပ် အမြဲတမ်း မစီးနိုင်ပါဘူး။ Tour ထွက်ရင်တောင် နေရာ အချိန်အခါ ကြည့်ပြီး ရှုးစီးမလား ညှပ်ဖိနပ် စီးမလား ဆိုတာ ကြည့်ရတယ်။ ရှော့ပင် ဘာညာထွက်မယ် လိုကယ်တွေ ဘာလုပ်တယ် အနီးအနား တစ်ဝိုက် လမ်းလျှောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ညှပ်ဖိနပ်ပဲ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်တဲ့ ခရီးစဉ်မှာ မီးတောင်တက်တဲ့ ခရီးစဉ် ပါတဲ့ အတွက် ခရီးသွားအေးဂျင့်က အနွေးထည် ယူသွားဖို့ ပြောပါတယ်။ စင်ကာပူကနေ လိုလိုမယ်မယ် လေယာဉ်ပေါ် ချမ်းရင် ဝတ်လို့ရအောင် မိုးကာလေကာ တစ်ထည် ယူလာတော့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကတော့ တောင်တက်ချင်တဲ့ သူတွေမှပါ။ ကျန်တာတော့ မလိုပါဘူး။
ခရီးသွား အာမခံကတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ကတည်းက Option တစ်ခုအနေနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းက ရောင်းပေးတတ်ပါတယ်။ ဝယ်တာ မဝယ်တာကတော့ ကိုယ့်ကဏ္ဍပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝယ်လိုက်တယ်။ အပြင်က DBS က ရောင်းတဲ့ Travel Shild ကိုလဲ သတ်သတ် ထပ်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ သူက နှစ်ယောက်ပေါင်းကို ၂၀% ဈေးလျှော့ပေးတာ အပါအဝင် ၆၄ ကျပ် ကျသင့်ပါတယ်။ DBS ကနေ ဝယ်ရင် ပထမဦးဆုံး Customer ဆို ၂၀% ဈေးလျှော့ပေးတဲ့ အပြင် တစ်ယောက်ကို ပလန် ၆၀ ကျော် တန်တဲ့ဟာ ဝယ်ရင် ဖိနပ်တွေ ထည့်လို့ရတဲ့ Adidas တံဆိပ် အိတ်လေးကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပြန်ပေးပါတယ်။ လေကြောင်းက ရောင်းတာက တစ်ယောက်က ၂၀ ကျပါတယ်။ အာမခံက အသွားအပြန် အတွက် အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုတွေ အကျိုးကျေးဇူး ရမလဲ ဆိုတော့
၁။ လေယာဉ်ထွက်ခွာချိန်ထက် ၆ နာရီ နောက်ကျ ထွက်ရင် တစ်နာရီကို ဘယ်လောက်ဆိုပြီး နစ်နာကြေး ပေးပါတယ်။
၂။ လေယာဉ်ခရီးစဉ် (အသွားအပြန် Single Trip အတွင်း) ကိုယ့် Luggage ပစ္စည်း ပျောက်ရှခဲ့သော် အလျော် ပေးပါတယ်။
၃။ ကွန်ပြူတာတွေ၊ နာရီတွေ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ခဲ့လို့ ရှိရင် အလျော်ပေးပါတယ်။
၄။ ခရီးသွားနေစဉ်အတွင်း ဖျားနာ နေမကောင်း မတော်တဆ ဖြစ်လို့ ဆေးရုံ ဆေးခန်း သွားရသည် ရှိသော် ဆေးရုံတက်စရိတ်၊ လူနာတင်ကား ခေါ်တဲ့ စားရိတ်၊ ဆေးခန်းပြတဲ့ အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်များ ပြန် Claim လို့ ရပါတယ်။
၅။ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက် ဆုံးပါးမှုများအတွက်လဲ လျော်ကြေး ပေးပါတယ်။
ဆိုတော့ ခရီးသွား အာမခံ ဝယ်ထားတာ မမှားပါဘူး။ သူက ရက် ၃၀ အတွင်း သွားလာတဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် အကျုံးဝင်ပါတယ်။
အကျယ်ကို ဖတ်ချင်ရင် ဒီက လင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာ လိုပါတယ်။ ဘက်ထရီကို အားများများ သွင်းပါ။ ဘက်ထရီ အပို ဆောင်ပါ။ ချာဂျာ ယူသွားပါ။
ဖုန်းအတွက်လဲ ချာဂျာတွေ ယူသွားပါ။
ဘာလီက တည်းခိုခန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ မီးပလက်ပေါက်က စင်ကာပူကနဲ့ မတူပါဘူး။2Pin Plug အလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူက သုံးတဲ့ ပလပ်တွေကတော့ အများစုဟာ3Pin Plug အပြား ဖြစ်ပါတယ်။
ဖူနန်က ချယ်လန်ဂျာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြား နီးစပ်ရာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာ ဖြစ်ဖြစ် Universal Travel Power Adaptor တွေ ရောင်းတာ ရှိပါတယ်။
All in One Travel Power Adaptor
အဲဒါလေးကို ဝယ်ထားပါ။ ဒါမှ ဘာလီ ရောက်ရင် ချာဂျင်သွင်းဖို့ သင့်တော်တဲ့ မီးပလပ်ပေါက် လိုက်ရှာရတဲ့ ဒုက္ခက ကင်းဝေးပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ All in One Travel Power Adaptor ကို ဝယ်ထားတာပါတယ်။
Camera, Camcorder တွေမှာ Memory Card တွေလဲ အပို ဆောင်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဘာလီ ရှုခင်းတွေက လှလွန်းလို့ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေ ခဏခဏ ရိုက်မိပြီး Memory Card တွေ ပြည့်သွားတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ CamCorder နဲ့ HD Video တွေ ရိုက်လိုက်တာ CamCorder ထဲက Built-In Memory 32GB အပြင် Memeory Card 32GB ပါ ပြည့်သွားတယ်။ ကိုယ်တွေ့။
(စကားမစပ် ချန်ဂီက ဂျူတီ ဖရီးဆိုင်မှာ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း ရောင်းတာ ရှိတယ်။ နာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေကို Discount တော်တော် ချပေးတယ်။)
ကဲ လိုအပ်တာတွေတော့ စီစဉ်ပြီးပါပြီ။
နောက်တစ်ပို့စ်မှာတော့ ခရီးထွက်တာ စတင်ပါတော့မယ်။
ဟိုး တက္ကစီ အိုင်ဝမ့်နားဂိုးတူ အဲယားပို့တ်....။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:12 AM
Tinkerbell May 17, 2012 at 9:58 AM
Hi, I also use Starhub - Pay as U Roam and based on my experiences, i do not need activate each time I go foratrip. It'll be auto-on once I reach my destination.
Ko Boyz May 17, 2012 at 10:51 AM
I think once you have activate it, it will be open and operate until you order starhub to deactivate it.
As for me, I just deactivate it after I arrived from oversea because if that function is still activate it, the roaming from Indonesia will be operate when you are in East Coast Park area.
Correction : I just received the Starhub bill this morning and I didn't see the charge for activation. May be they waived for me. :P
ချစ်ကြည်အေး May 17, 2012 at 1:08 PM
မီးတောင် မတက်ခဲ့ရဘူး မောင်ဘွိုင်းရယ်၊ မိုးတွေ ရွာနေလို့။ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်သွားချင်သေးတယ်။
ပုံတွေတင်ပါနော် နောက်ပို့စ်တွေ စောင့်ဖတ်နေပါမယ်း)))
Ko Boyz May 17, 2012 at 1:33 PM
မီးတောင်ကတော့ တစ်ကယ့် Adventure ပဲ
Vista May 17, 2012 at 1:16 PM
power adapter များ အနော်ကတော့ ဟိုတယ်ကနေ တောင်းပလိုက်တယ် ငှဲ
Ko Boyz May 17, 2012 at 1:34 PM
ဟယ်။ အဲလို တောင်းရမှန်း ဂယ်ကို မသိဘူး။
နောက်ကို သယ်မသွားတော့ဘူး။ တောင်းသုံးမယ်။
Yan Naing Aye May 18, 2012 at 1:19 PM
ငါလဲ ခရီးသွားရင် ပစ္စည်းတွေက မေ့မေ့ကျန်တတ်လွန်းလို့ စာရင်းလုပ်ထားရတယ်။ ကလေးပါတော့ သူ့အတွက်က အရေးကြီးတယ်လေ။ ဘင်တန် သွားတုန်းကတော့ ယူနီဗာဆယ် ပလပ်တင် မကဘူး ခရီးဆောင် မီးဖိုပါသယ်သွားတာ ဟီး... ဖုန်းကတော့ ဟိုမရောက်ခင်ကတည်းက ဆင်းမ် ကဒ် ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်လေ။ ဖုန်းကို currency convert လုပ်ဖို့ပဲ သုံးတယ် :P